Xubin Sare oo ka Tirsan Golaha Dhexe ONLF, oo Maanta la Xidhay – Rasaasa News
Xubin Sare oo ka Tirsan Golaha Dhexe ONLF, oo Maanta la Xidhay
Jijiga, Oct 21, 2020 – War aanu ka helay Ethiopia’s Somali regional State wuxuu xaqiijinayaa in la xidhay xubin sare oo ka tirsan golaha dhexe ee ONLF iyo dad shacab ah oo aanaan wali tiradooda helin.
Mr. Mohamed Ibrahin waa xubin sare oo ka tirsan golaha dhexe ee jabhada wadaniga xoraynta Ogadeniya (Jwxo). Mr Ibrahin waxaa saaka laga qabtay gurigiisa kadib kolkii ay weerareen ciidamo hubaysan oo Liyu Police ah, halkaas oo ay xoog kaga kaxaysteen hoyga uu ka dagan yahay magaalada Kebri Dehar.
Faruuq Cali Xaaji Warfaa, oo ah ku xigeenka madaxa xafiifka madaxtooyada ayaa laanta Afka Soomaali ee BBCda uu sheegay warar iskhilaafsan isaga oo mar yidhi “waxaa lagu xidhay amardiido, marna sheegay in ay dhigayeen kulan ayna fasax u haysan.”
Dhinaca kale Afhayeenka ONLF Abdiqadir Xasan Hirmoge (Cadani), ayaa BBCda u sheegay in ayna wali cadayn karin sababta lagu xidhay xubnahan sare ee ONLF. Waxaa kale oo u sheegay BBCda in lala wareegay xarunta ay ONLF ku leedahay magaalada Kebri Dehar halkaas oo ay ku hareeraysan yihiin ciidamada Liyu Police.
Waxaa moodaa in weerarka lagu qaadayo xubnaha ONLF in ay qayb ka yihiin talaabooyin cusub oo lagu ugaadhsanayo xubnaha iyo taageerayaasha ONLF, taas oo loo malayn karo in ugaadhsigan ay ka warhayso dawlada fadaraalka Itoobiya.
Sidan, si la mid ah waxaa shalay loo dhacay Xafiiska Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogadeniya ay ku leedahay magaalada Kebri Dehar, halkaas oo ay Liyu Police ka kaxaysteen ONLF representative wakiilka ONLF u fadhiya gobolka Korahe, ku xigeenkiisii iyo dhawr qof oo kale kuwaas wali ku xidhan mid ka mid ah xeryaha Liyu Police.
Jabhada wadaniga xoraynta Ogadeniya waa xisbi sharci ah oo ka diiwaan gashan Itoobiya, waxayna xafiisyo ku leedahay Addis Ababa, Dire Daw iyo dgamaan dagmooyinka gobolja ismaamulka Soomaalida.
Mass Arrests Targeting to ONLF Officials Continue in Somali Region